Ọ FỌRỌ NWA OBERE KA E MEMILAA BUHARỊ N’ISI ỤLỌ EKPERE NDI ALAKỤBA – hoo!haa!!
Ọ FỌRỌ NWA OBERE KA E MEMILAA BUHARỊ N’ISI ỤLỌ EKPERE NDI ALAKỤBA
Ọ fọrọ nwa obere ihe ka ndi iwe dị n’obi jiri iwe na ọnụma memilaa onye isi ala bụ Mohammadu Buhari ụbọchị Fraịdee gara aga n’isi ụlọ okpukpere ndi Alakuba di n’Abuja. Ndi kpara agwa a bụ ndi ana-ahụta dika ngalaba Alakụba akpọrọ Islamic Movement of Nigeria.
Ọ bụ ọbịbịa onye isi ala a nke ugboro abụọ ya n’si ulọ ụka ndi alakuba a kamgbe e duru ya n’iyi ọrụ n’afọ puku abụọ n’iri n’ise (2015). Ọ bịara maka agbam akwụkwọ ọgọ ya nwoke bụ Hamza. Ndi iwe na ọnụma juru obi wakporo ya ozigbo ha bụ ndi Alakuba kpechara ekpere izu ụka ha n’ụbọchị Fraidee gara aga.
Mgbe ndi nchekwa dị n’aka hụchatara ihe na-aga, ha gbara ọsọ kpuchite onye isi ala, ebe ndi iwe na ọnụmaa na-eti mkpu na-akpọkwa onye isi ala aha ọjọọ di iche iche dika onye ogbu ọchụ, onye ochịchị nchigbu nakwa onye ihu abụọ. Ha na-ekwukwa na ha di nkwadebe ịnwụ ma ọ bụrụ na ọ ga-egbu ha.
Ebe ọbụ na ndi ọrụ Julius Berger adịlari na mbụ kpụlite ogo aja mgbochi nke ụlọ ụka ndi Alakuba ahụ, owere ndi mmadụ anya na onye isi ala ga-abịa alụm nwanyị ọgọ ya Hamza.
Onye isi ala nke nọrọ ọdụ kama isekpu ala n’oge ekpere ahụ maka ahụ esighị ike gbalahụrụ onwụ nanị site na nzọpụ azọpụrụ ya.
Previous Post: Ista:Enugwu gwụrụ na Shoprite
Next Post: ANỤ